Curry spaghetti akoho | Recipe ao an-dakozia
Curry spaghetti akoho
Toñy Torres | | paty
Pasta dia iray amin'ireo lovia ankafizin'ny rehetra, Mora ny manomana ary afaka mampiasa singa tsy manam-petra ianao hahazoana sakafo matsiro sy hafa. Na inona na inona akora anananao ao anaty vata fampangatsiahana anao dia afaka manamboatra lovia paty ianao ary manamboatra sakafo ao anatin'ny minitra vitsy monja. Toy ity fomba fahandro entiko anao anio ity ho an'ny spaghetti miaraka amina kariho akoho.
Ny fikitihan'ny zava-manitra dia manome tsiro hafa amin'ny fomba fahandro, tsy mila manampy crème na zavatra matavy be hafa. Amin'izany no ahafahantsika manandrana ny paty nefa tsy mila manampy kaloria fanampiny. Lovia tsotra izay hamboarinao matetika mihoatra ny indray mandeha, satria azonao atao ny manamboatra azy amin'ny akora izay ananantsika matetika ao an-trano na mampiova ny lovia arak'izay itiavanao azy. Mazotoa homana!
Spaghetti 500 gr misy atody
Tratra akoho akoho 2 maimaimpoana
200 gr an'ny serrano ham tacos
Vovoka curry 1 sotro fihinanana
Menaka oliva fanampiny
Voalohany, hametraka vilany misy rano amin'ny afo isika, asio sira kely ary avelao hanafana.
Rehefa manomboka mangotraka ny rano dia ampio ny spaghetti nefa tsy vaky izy ireo ary andrahoy manaraka ny tolo-kevitr'ireo mpanamboatra.
Aorian'ilay fotoana mifanentana aminy dia arotsaho ary asio mangatsiatsiaka mba hanakanana ny fotoana fandrahoan-tsakafo ary hisorohana ny paty tsy hisakafo.
Ankehitriny dia hanomana ilay akoho isika, hanasa azy tsara amin'ny rano ary hanapaka azy ho kely, toy ny manaikitra.
Sira mba hanandrana ary ampio vovoka curry iray sotro.
Izahay dia manisy lapoaly lehibe amin'ny afo ary asio menaka oliva volo.
Manaraka izany, notetehinay ireo jiron'ny tongolo lay ary endasina mandritra ny segondra vitsy nefa tsy avelantsika hirehitra.
Haingana dia arotsakay ny sombin'akoho ary andrahoy miaraka tanteraka amin'ny tongolo lay.
Ankehitriny, esorinay amin'ny lafaoro ny lapoaly ary ampio ny barazy, tsy ilaina ny mahandro azy ireo mba tsy ho matsiro loatra.
Mba hamaranana dia ampio ny spaghetti amin'ny lapoely ary afangaro tsara mba afangaro ireo fangaro, ampio tsiro ronono mba hahatonga ny paty ho be ranony sy hafanana alohan'ny hanompoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » vilia » paty » Curry spaghetti akoho
Toast frantsay miaraka amin'ny sôkôla
Soso amin'ny saosy amandy